Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Kooxda CMA CGM waxay iibsatay afar diyaaradood oo Airbus A350F cusub ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Faransiiska • Ammaanka • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Kooxda CMA CGM waxay iibsatay afar diyaaradood oo Airbus A350F cusub ah.
A350F waxay ku salaysan tahay hogaamiyaha fog ee ugu casrisan aduunka, A350. Diyaaradda ayaa leh albaab weyn oo sagxadda xamuulka qaada ah iyo dhererka fiyuuska oo loo habeeyay hawlaha xamuulka.
Kooxda CMA CGM iyo Airbus waxay saxeexeen heshiiska isfahamka (MoU) ee lagu iibsanayo afar diyaaradood oo A350F ah. Dalabka, kaas oo ku xidhan dhamaystirka toddobaadyada soo socda, waxa uu kor u qaadi doonaa wadarta hawada ee CMA CGM ee Airbus ilaa sagaal diyaaradood, oo ay ku jiraan shan A330-200F.
Diyaaradan waxaa ku shaqayn doonta CMA CGM AIR CARGO, oo ah hawsha xamuulka hawada ee dhawaan la bilaabay Kooxda CMA CGM.
"Waan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno CMA CGM AIR CARGO ee kooxda ka shaqeeya A350F waxaanan si isku mid ah ugu faraxsanahay inaan taageerno horumarinta istaraatiijiyadeed mustaqbalka ee shirkadda," ayuu yiri Christian Scherer, Madaxa Ganacsiga ee Airbus iyo Madaxa Airbus Caalami. "A350F waxay si aan kala go 'lahayn ula jaan qaadi doontaa sidaha maraakiibta jirta ee Airbus xamuulka. Waad ku mahadsantahay qaab-dhismeedka hawada isku dhafan iyo matooradii ugu dambeeyay ee tignoolajiyada, waxay keeni doontaa waxtar aan la dabooli karin marka loo eego gubida shidaalka, dhaqaalaha iyo qiiqa CO₂, awoodna u siinaysa kobaca joogtada ah ee Kooxda. Scherer waxa uu ku daray: "Iyadoo hore loo sii ansixiyo sida xarun xamuul oo caalami ah sida Kooxda CMA CGM waa wax lagu farxo.”
A350F waxay ku salaysan tahay hogaamiyaha fog ee ugu casrisan aduunka, A350. Diyaaradda ayaa leh albaab weyn oo sagxadda xamuulka qaada ah iyo dhererka fiyuuska oo loo habeeyay hawlaha xamuulka. In ka badan 70% hawadu waxay ka samaysan tahay walxo horumarsan oo keenaysa 30t miisaan ka-fudud, taasoo dhalinaysa ugu yaraan 20% shidaal hoose oo ka sarreeya tartanka hadda ugu dhow. A109F waxay u adeegtaa dhammaan suuqyada xamuulka (Express, xamuulka guud, xamuulka gaarka ah…) waxayna ku jirtaa qaybta xamuulka weyn ee jiilka cusub ee xamuulka qaada oo diyaar u ah Heerarka qiiqa sii daaya ee 3 ICAO CO₂.